Ngwa ngwa: Ihe kpatara ịrụ ọrụ bụ igodo maka Smart Marketer | Martech Zone
Ngwa ngwa: Ihe kpatara ịrụ ọrụ bụ igodo maka Smart Marketer
Tọzdee, Septemba 29, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Iji nwee ihe ịga nke ọma na ngwa ngwa na-agagharị na njedebe nke ndị ọrụ njedebe, ndị na-ere ahịa chọrọ azịza ọsọ ọsọ, nchekwa, agbanwe agbanwe nke nwere ike ịnapụta ọdịnaya na oge. Ikpo okwu ngwa ngwa na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ na ngwa ngwa ngwa ngwa site na ịkwanye ọdịnaya gị nso na ndị ọrụ gị, na-enye ahụmịhe mara mma ma nwee nchebe gafee ụwa. Isi ihe dị na smart smart na-ebute ọrụ iji melite mgbanwe.
Ọsọ ọsọ Ngwọta Isi
Ngwa ngwa bụ netwọk nnyefe ọdịnaya (CDN) nke na-enye ndị azụmaahịa njikwa zuru oke otu ha si enyere ọdịnaya, ohere a na-enwetụbeghị ụdị ya ịrụ ọrụ ozugbo nchịkọta na ikike ịchekwa ọdịnaya na-agbanwe agbanwe na-enweghị atụ (dị ka akara egwuregwu ma ọ bụ ọnụ ahịa ngwaahịa) na nsọtụ.
Ndị ahịa ngwa ngwa na-eme ọdịnaya dijitalụ dị ka vidiyo na-asọ asọ, ibe ngwaahịa, isiokwu, wdg.nweta ha sitere na weebụsaịtị ha na ntanetị mmemme mmemme (API). Onye ahịa nwere ike ịmepụta ọdịnaya (ọdịnaya ndị ahịa) dị ka ibe ngwaahịa ma ọ bụ vidiyo ọhụrụ, dịkwa ka ndị ọrụ njedebe ndị ahịa (dị ka ihe ndị ọrụ mepụtara). CDN ngwa ngwa na --eme ka nnyefe nke ọdịnaya ahụ rụọ ọrụ nke ọma site na ịchekwa nwa oge na ọnọdụ dịkarịsịrị nso na onye ọrụ njedebe. A na-akpọ usoro ịchekwa mbipụta ndị a dị ka "caching," iwepu ọdịnaya oge ochie a na-akpọ "ịchacha," a na-akpọkwa ebe nkesa ebe ha nọ na "PoPs."
Ngwa ngwa tinye ụyọkọ sava cache na mpaghara ebe dị mkpa, a na-akpọ nke ọ bụla dị ka isi ọnụnọ (PoP). Onye ọ bụla Pop nwere ụyọkọ nke ngwa ngwa cache sava. Mgbe ndị ọrụ njedebe na-arịọ ihe ndị ahịa nke ọdịnaya, na-anapụta ha ngwa ngwa nke ebe nchekwa dị nso na onye ọrụ ọ bụla.
Ngwa ngwa nwere ike iri puku kwuru puku webụsaịtị maka ụlọ ọrụ sitere na nha site na azụmaahịa obere na nke etiti ka ngalaba ngalaba nnukwu ụlọ ọrụ, gafee ọtụtụ ọrụ (gụnyere mbipụta dijitalụ, e-commerce, vidiyo na ntanetị & vidiyo, SaaS, na njem & ile ọbịa) . Ndị ahịa ugbu a gụnyere Twitter, Hearst, Stripe, GitHub, BuzzFeed, KAYAK, Dollar Shave Club na About.com.
Kedu ihe kpatara ndị ahịa ji eche banyere CDN
Otu mmepe na-adabere ịdabere na iwulite ihe na ogo na nke ikpeazụ, ebe ahịa chọrọ nnukwu ihe na - esote - ma chọọ ya ụnyaahụ. Peeji ihu na arụmọrụ dị oke mkpa na ahụmịhe onye ọrụ njedebe; ya mere ndi otu mmepe kwesiri iji netwọọkụ nnyefe ọdịnaya (CDN). Enwere isi ihe abụọ kpatara ndị ahịa na IT kwesịrị iji lebara CDN anya:
CDN na-enyere aka melite mgbanwe ndị ahịa
Nnyocha na-egosi na oge na-adịghị ngwa ngwa bụ ọnụ ọgụgụ-otu ihe kpatara na ihe karịrị 70% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị hapụrụ ụgbọ ala. Dị ka otu nnyocha si kwuo, "ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa na UK na ihe karịrị ọkara nke ndị nọ na United States na-ekwu na ịdị nwayọ saịtị bụ isi ihe mere ha ga-eji hapụ ịzụrụ ihe". CDN nwere ike ibuli oge ibu peeji ma belata latency maka weebụsaịtị gị, nke ga-enye aka na ntụgharị ntụgharị ka ukwuu. Oge ịrụ ọrụ e mere ka ọ dịwanye mma nwere ike ịpụta ọdịiche dị n ’etiti abysmal na ezigbo ahụmịhe onye ọrụ mgbe ị na - eji nwayọ na njikọta mkpanaka.
Ezubere CDN ya ngwa ngwa iji nye ndị ọrụ mmepe njikwa zuru oke maka etu ha si arụ ọrụ ọdịnaya, na-enye ha ohere zuru ike na ndị na-azụ ahịa ịntanetị nwere ike ịlele - yana, nke ka mkpa, zụta - ngwaahịa nke ọma. CDN ngwa ngwa na-echekwa ọdịnaya dị na sava ọnụ, nke pụtara na mgbe onye ọrụ pịa na saịtị gị, arịrịọ ha ga-agarịrị na sava ahụ dịkarịrị nso na ha, ọ bụghị n'ụzọ niile ịlaghachi na sava mmalite (nke nwere ike mara mma) tere aka ebe ndị ọrụ gị nọ). A nnyocha a na-adịbeghị anya achọpụta na 33% nke ndị na-azụ ahịa anaghị enwe ike ịzụta n'aka ụlọ ọrụ na ntanetị ma ọ bụrụ na ha enweta arụmọrụ na saịtị yana na 46% ga-aga na weebụsaịtị ndị asọmpi Iji hụ na ahụmịhe dị mma ma nwekwuo ohere ndị ahịa ga-alaghachi na weebụsaịtị gị n'ọdịnihu, a ga-enyefe ndị ọrụ ọdịnaya ngwa ngwa o kwere mee.
Data sitere na CDN nwere ike ịgwa gị usoro ịzụ ahịa
Niclọ ahịa nke Omnichannel na-aghọzi ọnọdụ; ndị na-azụ ahịa na-enyocha ihe n'onlinentanet na ekwentị tupu ha agaa ahịa ụlọ ahịa. Dabere na Adweek, 81% nke ndị na-azụ ahịa na-eme nchọpụta n'ịntanetị tupu ịzụta, mana 54% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị chọrọ n'ezie ịhụ ngwaahịa ahụ tupu ha azụta. N'iburu omume a, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịchọpụta etu mbọ azụmaahịa dị n'ịntanetị na-aga nke ọma (ozi ịntanetị, nkwalite, mgbasa ozi na mgbasa ozi mmekọrịta) n'ihe metụtara mmekọrịta na ahịa ụlọ ahịa.
Otu CDN nwere ike inye aka gwa usoro azụmaahịa dị n'ịntanetị, na-enye ndị otu ọhụụ otu esi azụ ahịa n'ịntanetị na-akwado ire ahịa ụlọ ahịa, na ime ka mgbasa ozi ahịa dị nso. Site na Nchọpụta ngwa ngwa GeoIP / Geography, ndị ahịa nwere ike iji nyocha elele anya nke otu ihe ma gosipụta mmekọrịta n'etiti nyocha na ntanetị na ịzụ ahịa na ụlọ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ere ahịa dijitalụ nwere ike iji teknụzụ ngwa ngwa gaa geo-ngere maka ụfọdụ kilomita dị nso na ụlọ ahịa ahụ, ma lee anya na peeji nke ihu. nchịkọta maka otu ihe. In-store sales nwere ike iji tụnyere ma iche na online page echiche iji chọpụta ma ọ bụrụ na e nwere a mmekọrịta dị n'etiti a Shopping ele online na mgbe ahụ na-azụ na-echekwa, na ahịa nwere ike ịgbanwe nkwado mgbalị ya.
A na-eji ngwa mgbama iji kpokọta data gbasara omume ndị ahịa ma lekwasịrị ndị ahịa anya dabere na mmasị, nso, wdg iji mee ka njikọ aka - ihe dị mkpa nke usoro ịre ahịa ọgbara ọhụrụ. Iji CDN na caches iji kwụsị mgbama nsuso nso onye na-azụ ahịa nwere ike mee ka ngwa ngwa ngwa ngwa ma mee ka nchịkọta nke data azụmaahịa dị mkpa.
Performance nlekota ngwaọrụ na-enyere aka
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị ahịa nke na-agba mkpọsa mgbe niile na nyocha A / B, ị kwesịrị ị na-elezi anya maka otu ọrụ gị si emetụta arụmọrụ weebụsaịtị gị.
Ngwa oru nleba anya na ntanetị nwere ike ikwe ka ndị ahịa nyochaa ihe niile dị na weebụsaịtị na ngwa mkpanaaka. Ngwaọrụ ndị a na - enye gị ohere ịnwale ma nweta nchịkọta maka akụkụ ọ bụla nke akụrụngwa saịtị, gụnyere data dịka oge njikọta, nzaghachi DNS, ụzọ nchọta, wdg. Site na nlekota oru, enwere ike nwalee saịtị site na gburugburu ebe obibi "dị ọcha", nke bara uru karị mgbe ị na-anwa ịchọpụta otu ọhụụ Njirimara agbakwunyere na ibe (dika mgbasa ozi ma ọ bụ pikselụ nsuso) ga-emetụta arụmọrụ nke saịtị gị niile, wee si otú a chọpụta ma ọ ga-enye ROI dị mma. CDN nke oge a nwere ike imezi ma dozie ule A / B, na-enye ndị ahịa ohere ịlele nsonaazụ n'oge ma na-arụ ọrụ arụmọrụ kacha mma.
Ndị na-ere ahịa na-agbakwụnyekwa ihe ndị ọzọ "ndị ọzọ" na weebụsaịtị ha ma ọ bụ ngwa mkpanaka - ihe ndị dị ka plugins mgbasa ozi, ntanetị vidiyo, akara nyocha, na mgbasa ozi. Mana ụdị ọdịnaya ndị ọzọ nwere ike ibelata arụmọrụ saịtị. Nke a bụ ihe atụ ọzọ dị mma maka ihe kpatara nyocha arụmọrụ ji dị mkpa - ka ọ bụrụ na a na-eji plugins na mgbakwunye tinye ya na weebụsaịtị anaghị ebute ya nwayọ ma ọ bụ daa.
Ihe omumu nzipu nke ihe omuma nke netwok - Stripe
Stripe bu ugwo ugwo nke na emeputa otutu ijeri dolla kwa afo otutu ulo oru, site na mmalite ohuru ohuru rue ulo oru ndi 500. N'ihi na ịnakwere ego bụ ndụ nke azụmaahịa ọ bụla, Stripe chọrọ ụzọ dị irè iji jeere akụ ha ọsọ ọsọ ma na-echekwa nchekwa maka ndị ọrụ ha. Na ịhọrọ CDN, Stripe chọrọ onye ọlụlụ nke nwere ike inyere ha aka ịnọgide na-enwe ntụkwasị obi dị elu ma na-achọkwa ịrụ ọrụ. Stripe tụgharịrị na Fastly, nke ha hụrụ dị oke nfe ịhazi ma nye nkwado ndị ahịa dị egwu.
Ikike ngwa ngwa iji mee ka ọdịnaya di egwu na ihe nzuzo dị egwu nyere aka belata oge ibu maka ndenye ego Stripe (ụdị ịkwụ ụgwọ maka desktọọpụ, mbadamba na ngwaọrụ mkpanaka) site na 80%. Nke a sụgharịrị ịbụ nnukwu uru maka ndị ọrụ Stripe: maka onye ahịa njedebe na njikọ mkpanaka, ọ bụ ọdịiche dị n'etiti ahụmịhe nzụta nke ọma na nke dị mma. Ulo oru di iche iche na-eji eriri di iche iche eme ihe, mana ha na ndi ulo ha, obi uto ha na Stripe di elu - na ahuhu ha nyere ndi ahia ha ka nma - mgbe oru ha kariri nke oma.
Ele ọmụmụ ihe
Tags: cdnọmụmụ ihe cdnnetwọk nnyefe ọdịnayangwa ngwaarụmọrụarụmọrụ nlekotastraipuarụmọrụ weebụsaịtị
Nrụ ọrụ Network na Viralstyle: Njikọ Ndị Nlekọta na chazụ ahịa
Anyị enwere ike Biko Getna-eme nke ọma n’ahịa onwe anyị?